garabka isbedel doonka UCID oo dacwad u gudbiyay maxkamada sare iyo Gudida Doorashooyinka | Somaliland.Org
July 31, 2011	Hargeysa(Somalilad.Org)- Hoggaanka ku meel gaadhka ah ee xisbiga UCID, ayaa maanta markii u horaysay shaaca ka qaaday inay dacwad ka dhan ah Faysal Cali Waraabe u gudbiyeen Maxkamada sare ee dastuuriga ah iyo Guddida doorashooyinka qaranka.
Sidaasi waxay ku sheegeen war-saxaafadeed dheer oo garnaqsi ah oo ay maanta soo saareen garabkaasi waxaanu u dhignaa sidan:-
“Maalmahan ugu dambaysay,waxa uu guddomiyihii hore Faysal Cali Waraabe uu ku jahawareeriyay warbaahinta in laga eryay xisbigii. Waxaad wada xusuusantihiin in maalintii May 18, 2011 ee reer Somaliland oo dhami hadii ay xisbi yihiin, hadii ay yihiin goloyaal, ururada bulshadu iyo qurbojooguba ay u balansanaayeen in dabaaldaga sanadkan halku dhagiisa laga dhigo ictiraaf raadintii Somaliland. In Faysal qoray maqaal ka soo horjeeda wixii lagu balansanaa oo uu yidhi Somaliland mid jirta ma aha waxay la midtahay halkii ay joogtay 1988. taasi waxay noqotay arin fajiciso galisay shacbiga Somaliland meel kasta oo ay joogaan. Xisbigana u gaysatay dhaawac wayn. Waqtigaa waxa uu faysal ku maqnaa oo uu joogay dalka Finland. Si loo badbaadiyo dhaawaca xisbiga ku yimid, sii hayahii gudoomiyonimada xisbiga UCID iyo gudigii fulinta ee joogtay hargeysa waxay soo saareen war saxaafadeed ay ku cadaynayaan in maqaalkaa uu faysal qoray ay isaga gaar u tahay oo aanu ku hadal afkii xisbiga.arintaasi way cadho galisay faysal oo markii uu soo noqday waxuu is hortaagay dhamaan shirarkii xisbiga isagoo aflagaado iyo cay kula kacay dhamaan gudidii fulinta ee xisbiga. Waxa u qoondaysnaa xisbiga in la qabto shirkii golaha dhex iyo shirwaysnihii guud oo loo balansanaa in gudigii qaban qaabada la magacaabo. Faysal waxa uu ku adkaystay in wax shir oo laqaban karaa aanu jirin. Ergooyin badan ayaanu u dirnay inuu soo fadhiisto oo laga wada hadlo in xisbiga shaqadii u taalay la qabto haseyeeshee wuu diiday oo waxa uu yidhi xisbigan anigaa iska leh cid ila lehina ma jirto ee xisbiga qaran ee aad sheegaysaan idinku doonta. Wax a uu xilka guddoomiyuhu uu dhacayay July 27, 2011 oo ay ku buuxeen shantii sanadood ee guddoomiyaha lagu doortay shirwaynihii ugu danbeeyay ee la qabta July 27, 2006. Waxa xeerka xisbigu sheegayaa qoddobkiisa 25 in mudada xilka guddomiyenimo iyo musharaxba ugu badnaan uu noqon karo laba jeer (two terms only). Xeerkaas oo lagu ansixiyay shirkii golaha dhexe ee la qabtay 25-27 july 2009 looguna doortay faysal iyo Mahamed Rashiid inay noqdaan musharax madaxweyne iyo madaxwaysne ku xigeen iyadoo lagu sameeyay wax ka badal xeerkii hore waxa xusid mudan in marar badan oo aan ka la hadalnay in waqtigii guddoomiyenimadiisu ay dhamaanayso July 27, 2011. uu faysal si badheedh ah u yidhi waxba kama jiraan arintaas oo xisbiga anigaa iska leh intaan dhimanayana waan joogayaa.
Ugu dambayn waxaan u qornay anagoo ah hogganka sare ee xisbiga warqad aan ku codsanayno inuu ka soo qaybgalo shirka gudida fulinta ee bilaahaa oo lagu qaban doono xafiiska july 24, 2011 si uu u gudoomiyo shirkaas oo looga gaadho go’aan waqtigii la qaban lahaa shirweynaha xisbiga iyadoo ay joogaan 24 xubnood oo ka tirsan guddida fulinta, nasiib daro wuu ku soo gacan saydhay hogaankii xisbiga ee u geeyay warqadaas.
Si loo badbaadiyo xisbiga oo mudadiisu dhacaysay july 27, 2011 guddidii fulanta oo ka kooban 24 xubnood ayaa shirkii qabtay, waxaanay go’aamiyeen in la qabto shirwaynihii xisbiga 45 cisho ka bacdi oo ku beegan todobada ilaa sideeda bisha sagaalaad (Sebtember 6 to 8, 2011) sida xeerku banaynayo qodobkiisa tobnaad faqradiisa afraad, waxaanay magacaabeen guddi ku meelgaadh ah oo shaqada sii wada mudadaas.waxa Faysal la socday isaga iyo laba kale . Guddiga fulinta tiradoodu waa 35 inta ka dhimana dibada ayey kumaqnaayeen.
Faysal waxay ka dhamaatay isaga muddadii xilkiisii labaad July 27, 2011. Xisbiga UCID malaha qodobkii saddex iyo sideetanaad ee distoorka ku yaalay ee guurtidu ugu jadiidin jirtay markuu madaxwayne ka dhamaato mudadu iyo guurtidii jadiidinaysay midna ma laha xisbigu. Cid eridayna ma jirto ee waqtigiisii baa dhamaaday, ee sidaa ummadu ha ogaato.
Waxa meesha yaalaana waa arrin sharci cidii dacwad ka qabtaana waxa u furan maxkamadaha oo lagu kala baxaa. Waxa Somaliland ay ku caan tahay oo kaga duwan tahay geeska Africa nabadgelyada balaadhan ee ummaddeedu ay ku naaloonayso maalmahan ugu dambeeyey waxaa muuqata inuu guddoomiyihii hore ee xisbiga UCID uu ku kacayo falal ka dhan ah nabadgaliyada isagoo soo abaabulaya dhalinyaro iyo dumar si ay u khalkhaliyaan xasiloonida caasimada maalintii july 26, 2011 iyada oo ay fadhiyaan xafiiska ayuu intuu basas ku soo qaaday ciyaalkaas isagoo hor kacay xafiiska nagu soo weeraray oo moobiladii guddoomiyaha ku meel gaadhka ah iyo xoghayaha guud ay kala baxsadeen waxa arintaa goobjoog ka ahaa booliiska Somaliland. Markii rabshadii iyo buuqii ay dami waayeen waxa ay go’aamiyeen ciidamada nabadgaliyadu in xafiiska la xidho muftaaxiina way la wareegeen, anagu waxaanu nahay rag waaween oo waayeel ah oo waanu u hoggaansanay amarkii. Ilaa maalintaas waxa guddomiyihii hore ku hayaa caasimada xaalad nabad galyo daro ah. Ugu dambaytii shalayoo ay taariikhdu ahayd July 30, 2011 waxa isaga iyo kooxdiisii ku soo duuleeen boliskii xafiiska ilaalinayay oo aad wada maqlayseen inay halkaa rasaasi ka dhacaysay.
Anagu qayb kamaanu ahayn rabshadahaas markii dambena waxay u talaabeen xagaa istaar oo ay dariiqyadii xidheen oo ay isku dayeen inay ku duulaan gurigii guddoomiyaha baarlamaaanka. Hase yeeshee booliska ayaa iska hortaagay waxa wax lala yaaba ah in galinkii dambe guddomiyihii u qudbadeeyey dadkii uu soo abaabulay oo uu lahaa “walaalayaal nabadgalyada dhowra” carabtaa waxay ku mahmaahdaa ninkii ninka dilay ee hadana aaskiisii tagay dadku caruur maaha. Isagii abaabulayay ayaa iska dhigaya inuu hadana dajinayo. Wasaarada daakhiliga iyo xakuumada waxay masuul ka tahay nabad galiyada dalka maahana in lagu daawado waxaa uu sameenayo guddomiyihii hore ee xisbiga UCID. Sababta oo ah nabad galiyadu umada ayay dan u tahay. Anagu haddii aanu nahay guddida ku meel gaadhka ah waxaan dacwadayada u gudbinay guddida doorashooyinka iyo maxkamad distooriga ah. Faysalna wixii uu dacwad qabo ha u maro sharciga, sababtoo ah waxaa na dhexyaala arrin sharci. Asxaabta qaranku waxay u dhaxeeyaan gobolada dalk sida ku cad distoorka qaranka iyo xeerareka doorashooyinka. Faysalna waxaa uu yidhi xisbiga UCID waa Hargaysa oo kaliya kaas oo meel ka dhac ku ah ummada.”
Previous PostMudaneyaasha Golaha Wakiilada oo Ansixiyay Xeerka furista Ururada siyaasaddaNext PostXukuumadda Somaliland Oo Iska Fogeysay inay ku lug leedahay khilaafka xisbiga UCID	Blog